लमजुङ Archives – Page3of 8 – Samacharpati Samacharpati लमजुङ Archives – Page3of 8 – Samacharpati
लमजुङ, १७ भदाै । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण व्यापक रुपमा फैलिएर लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहर कोरोना संक्रमणको ‘हट स्पट’ बन्दै गएको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या जिल्लाभर २ सय १५ रहेको छ भने आइसोलेसनमा १ सय २ जना रहेका छन् । कोरोना संक्रमितमध्ये धेरैजसो लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरका रहेका छन् । दिनहुँजसो संक्रमित थपिन थालेका छन्, यसले […]
पोखरा, १२ भदौ । पोखरामा शुक्रबार मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं. ७ रामबजारका एक जनाको मृत्यु भएपछि रामबजारमा त्रास छाएको छ । मृतक व्यक्ति २ दिन अघि मात्र पोखरा आएको र त्यस अगाडी बजारमा हिडडुल गरिरहेकाले करापुटारमा कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ । उनको कुनै हिस्ट्रि नभएको बताइएको छ उनलाई कसरी संक्रमण भयो भन्ने विषयमा खोज्नेकाम […]
पोखरा, १२ भदौ । पोखरामा शुक्रबार मृत्यु भएका ५२ वर्षिय पुरुष १० गते पोखरा आएको पाइएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ७ का अध्यक्ष गगन घिमिरेका अनुसार उपचारको लागि भन्दै उनि १० गते करापुटारबाट आएर पोखरा १६ आफन्तकोमा बसेका थिए । उनको ११ गते स्वाब लिइएको पोखरा १६ वडा अध्यक्ष जिवन प्रसाद […]
पोखरा, १२ भदौ । पोखरामा शुक्रबार मृत्यु भएका कोरोना संक्रमित लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं. ७ करापुटारको रहेको बुझिएको छ । पोखरा स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानले पोखरा १६ का पुरुष भनेको छ । उनिहरु अहिले जुन ठाउँ मा छन् ठेगाना टिपाएका छन् त्यहि ठाउँ उल्लेख हुने पश्चिमाञ्चल अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो । तर […]
लमजुङ, ७ भदौ । बेंसीशहर नगरपालिका–९ स्थित साम्दी थापा गाउँमा आज बिहान मानिससँगको भिडन्तमा एक चितुवा मारिएको छ । बिहान ६ बजेतिर गाउँ पसेर बालकमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि ६३ वर्षीय हरिबहादुर थापाले हँसिया प्रहार गर्दा चितुवा मारिएको हो । थापा र चितुवाबीच केही बेर घम्साघम्सी नै परेको थियो । भिडन्तमा थापा घाइते भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी […]
इशानेश्वर महादेवलाई चिनाउदै तिजको गित ‘लैबरी चट्टै’
करापुटार, २ भदौ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको इशानेश्वर महादेवको महिमा वर्णन गरिएको विष्णुमाया घिमिरेको तिजको गित इशानेश्वर महादेव सार्वजनिक भएको छ । सकुन्तला घिमिरेले रचना गरिएको सो गितमा विष्णुमाया पौडेल घिमिरेको स्वर रहेको छ । गितमा सविता घिमिरे, लक्ष्मि देवी गिमिरे, पवित्रा गौतम, संगिता घिमिरे, गिता घिमिरे, संगिता घिमिरे पौडेल, […]
प्रल्हाद चन्द्र घिमिरे, भोर्लेटार, १ भदौ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने खतरा बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र रोकथाम गर्न लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ । साउन ३२ गते एक सुचना प्रकाशित गरेर नगरपालिकाले भदौ १ गते देखि अर्को सुचना जारी नहुदासम्मको लागि लागु हुने गरी अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको हो […]
भोर्लेटार, १ भदौ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र बनाई संचालन भइरहेका सहकारीहरुलाई सुचिकृत हुन आग्रह गरेको छ । गत साउन २५ गते प्रकाशित सुचनामा भनिएको छ – मध्यनेपाल नगरपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यस नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र बनाई दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सुचिकृत हुनुपर्ने प्रवधान रहेकाले सुचना प्रकाशित भएको मितिले […]
मध्यनेपाल पोलिक्लिनिक संचालन, विश्वसनिय सेवा उपलब्ध गराउन मेयर पाण्डेको आग्रह
भोर्लेटार, १७ साउन । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका भोर्लेटारमा मध्यनेपाल पोलिक्लिनिक संचालनमा आएको छ । पोलिक्लिनिकको नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले एक कार्यक्रमका बिच उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रमुख पाण्डेले पोलिक्लिनको सेवाले स्थानियलाई स्वस्थ्य रहनु ठुलो भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । बिरामी भएर जचाउ जानुभन्दा पनि रोग नलागोस भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्ने भन्दै पाण्डेले जुनसुकै रोगको पनि […]
लमजुङ, १३ साउन । सुन्दरबजार नगरपालिकाकाे भाेटेओडारमा बिजुलीकाे पाेलमा चढेर काम गर्दै गरेका एकजना युवाकाे करेन्ट लागेर ज्यान गएकाे छ। सुन्दरबजार ९ भाेटेओडार स्थित भक्तिनमुना मावि नजिकै साेमबार बिजुलीकाे पाेलमा चढेर केवुल नेटवर्ककाे तार जडान गर्ने क्रममा करेन्ट लागेपछि दाेदी गाउँपालिका २ अर्चलबाेटका २७ वर्षीय भविष्य भुजेलकाे ज्यान गएकाे हाे। काम गरिरहेकाे अवस्थामा बिजुलीकाे नाङ्गाे […]
लमजुङमा जीप दुर्घटना हुँदा ७ जना घाइते
लमजुङ, ४ साउन । लमजुङको बेंसीशहर नगरपालिका १ गाईखुरे झरना नजिकै शनिबार साँझ ६ बजेतिर जीप दुर्घटना हुँदा ७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १ जनाको अवस्था गम्भीर छ । गाईखुरे झरनाबाट फर्कने क्रममा ग ३ च १५२५ नम्बरको बोलेरो जीप सडकबाट खसेर दुर्घटना हुँदा बेंसीशहर नगरपालिका ८, नारायणस्थानमा बस्दै आएका ४२ बर्षीय बालकृष्ण श्रेष्ठलगायत […]